उपचुनावमा कुन गाडी चल्छन्, कुन चल्न पाउँदैनन् ? - NepalDut NepalDut
उपचुनावमा कुन गाडी चल्छन्, कुन चल्न पाउँदैनन् ?
मंसिर १४ गते शनिबार कास्की २ मा उपचुनाव हुँदै छ । पोखरा महानगरका ११ वटा वडामा हुने चुनावको मौन अवधि सुरु भइसकेको छ ।
यो अवधिमा प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन । पोखरा महानगरले यो क्षेत्रमा पर्ने २९ सार्वजनिक स्कुलमा ३ दिन बिदा दिइसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले सूचना निकालेर १३ गते राति १२ बजेदेखि १४ गतेसम्म निर्वाचन हुने क्षेत्रमा सवारी चलाउन नपाइने जनाएको छ । यो अवधिमा एम्बुलेन्स, दमकल, खानेपानी, शववहान, दुरसञ्चार, विद्युत, अस्पताल सेवा र निर्वाचन पास लिएका गाडीमात्र चल्न पाउने जनाइएको छ ।
यो अवधिमा कास्की २ भएर अर्काे जिल्लामा जाने सवारी साधनलाई भने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वमा विजयपुर, पश्चिम उत्तरमा यम्दी पुल, दक्षिण पश्चिमा कालीमाटी खोलमा सवारी रोकी ३, ३ घन्टामा स्कटिङ गरी कास्की २ पार गराइनेछ । यो बीचमा कुनै यात्रु चढाउन र ओराल्न पाइने छैन ।
यो अवधिमा अपरिचित व्यक्तिहरुको प्रवेश, गतिविधि र शंकास्पद व्यवहार देखिएका पनि प्रहरीलाई खबर गर्न अधुरोध गरिएको छ ।